Mawiricheya Zviwanikwa - Kuremara & Kusarura | Karman® Mawiricheya
Mawiricheya Zviwanikwa - Kuremara & Kusarura
Posted on July 16, 2013 December 16, 2020 by csr 1687
Vanhu vari kurarama ne hurema huso kuwanda kwematambudziko muhupenyu hwavo hwezuva nezuva. Muchokwadi, zvinoenderana nekuomarara uye mhando of kuremara, matambudziko anogona kubva pane zvinowanika nyaya kuenda kunzvimbo yebasa chinja matambudziko. Nekudaro, rimwe rematambudziko anonetsa kusarura kweiyo remara. Mukufamba kwenguva, remara vanhu vakatarisana nerusarura rwakananga nekusajeka. Pane kusarura kwakananga muchimiro chevashandirwi vasingade kuhaya remara vanhu. Imwe nzira yerusarura yakanyanya kujeka, asi yakangofanana nerusarura rusina kunanga. Apa ndipo apo, nekuda kwekuwanika nyaya kana zvakafanana zvipingamupinyi zvezvakatipoteredza, remara vashandi havakwanise kuita basa rakafanana nevasiri-remara.
Kurwisa nyaya yerusarura pakati remara vanhu, hurumende ine yakapihwa zviri pamutemo batsira nenzira yevaAmerican vane Chirema Mutemo, pamwe nemimwe mitemo yakafanana. Aya matanho epamutemo akabatsira kubvumidza remara vashandi kuti vave nekodzero dzakaenzana nedzisiriremara. Kuti udzidze zvakawanda nezve matambudziko remara vashandi vane, heano mamwe mawebhusaiti anobatsira:
Chokwadi, kubasa kwave kuri sosi hombe yezvinetso kune remara vanhu. Nzvimbo imwechete yebasa inogona kunge isiri dambudziko kune vasiri-remara vanhu sezvavari kune vasina kuona zvakanaka, vasinganzwe kunzwa, kana vashandi vane kufamba nyaya. Kuita kuti nzvimbo yebasa ishandiswe kune iyo remara, vashandirwi vaifanira kugadzira iyo midziyo uye nzvimbo inokwanisa kugara remara vashandi.
Kuongorora kweKushandira Pabasa Pabasa
Kuremara Kusarura munzvimbo yebasa
Kusarura Kuremara Pabasa
Nhungamiro yehurema munzvimbo yebasa
Kune nzira idzo zvivakwa, mahofisi, nezvimwe zvivakwa zveveruzhinji uye zvisiri zveveruzhinji zvakashandurwa kuti zviwane zvinodiwa ne vakaremara. Imwe yeiyi pekugara ine madhoo ari kufambidzana by wiricheya. Zvakare, kune michina yakadai seATM ine mavara muBraille yeakakanganiswa chiratidzo. Chekupedzisira, pane zvinonzwika zvinowedzera kune avo vasinganzwe kunzwa. Idzo gadziridzo dzave akaita kubvumidza remara vanhu kuti vafarire mabasa ese aripo.
Kugara Vadzidzi Vane Urema
Kuremara Kwekugara paJobho
Vanotsvaga Jobho Vakaremara
Kubasa Pokugara uye Inotsigira
Dambudziko rekuwanika rave iri nyaya ye vakaremara vanhu. Semuyenzaniso, wiricheya vanhu vakasungwa vaipinda mubhangi vakatadza kusvika kumatauri ekuverenga. Matambudziko akadai seaya akatungamira iyo kusunda kugadzira zvivakwa nemahofisi zvakanyanya kufambidzana kuvanhu vese. Zvisikwa zvakaita semataresi epasi anotendera vanhu vane mavhiripu mukana wekuitisa bhizinesi rezvemabhizimisi une akaita zviri nyore kuwana masevhisi.
Kuwanika uye vakaremara
Kuwanika uye Kuremara
Nhungamiro kuKodzero dzevakaremara uye kuwanika
Rakaremara Ruzivo rwekuwanika
Hurumende yakadzika mutemo uyo inopa kudzivirirwa kwe remara vanhu kuona kuti vanhu vese vabatwa zvakafanana uye kuti rusarura haruitike. Mitemo iriko zvino irikubva pamitemo yebasa kumitemo yehutano kumitemo yedzimba nemirau. Nepo matambudziko eiyo remara uye vakaremara vasina kuenda, ivo akaderedzwa pamakumi mashoma apfuura. Saka, izvi zvinongoita kuti zvive nyore kuzvizvarwa zvinotevera zve remara vanhu.
kuremara Bhuku RezveMutemo
Yakaremara Mitemo yeVadzidzi
Nhungamiro kuMitemo Yekodzero Yevakaremara
Kodzero dzevakaremara Nhungamiro
Akaremara neMitemo yeMabasa
kuremara Mitemo neMirau
Nepo gwaro iri richibatsira ipa ruzivo on remara uye nyaya dzerusarura, kune akawanda akawanda masayiti anobatsira aripo. Heano mashoma anobatsira general ruzivo masaiti ekushanyira:
Dhipatimendi Rezvevashandi Vakaremara Zviwanikwa
Mhuri uye Kumba Kuremara Zviwanikwa
Kukwegura uye Kuremara Zviwanikwa
Kubudirira Kuremara Resource Links
Akaremara Resource Center
Pakupedzisira, kusarura pakati pe remara rave kushoma kwedambudziko mumakore apfuura. Nekupfuura kwemaAmerican ne Kuremara Mutemo, Rehabilitation Act, Fair Housing Act uye Vanhu vane Kuremara Dzidzo Mutemo, uye mimwe mimwe mitemo yakakosha nemirau, iyo remara vakave nekodzero nemikana yakawanda kupfuura nakare kose. Nepo mamiriro ezvinhu e remara vanhu vane yakagadziridzwa, haina kukwana. Iyo tariro ndeyekuti kuwana kunoramba kuchienderera kuve akaita. Ndinovimba izvi zvinotungamira kuchinangwa chekupedzisira chekubvisa rusarura rwe remara. Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne 1800wiricheya; tinopa migero yewiricheya, kufamba-famba vanofamba,mobility scooters, & vanofamba.
Zvemutemo Zviwanikwa zveVakwegura
Ndeipi Chinhu Chakanyanya Kuita Nezvevanodheerera?